China Wholesale Customized Private Label Boxes 3D Lashes 100% Real Mink Eyelashes Vendors factory and mpanamboatra | Weiti
Ambongadiny marika manokana marika marika manokana 3D Lashes 100% mpivarotra volomaso Mink
1, kapoka volom-borona mink 18mm an'ny style AILSA
2, volomaso 3d malemy, malefaka, voajanahary
3, Misy marika manokana namboarina
4, 100% volo vita amin'ny mink ultra-maivana vita tanana
MITSY SAINGA OEM & ODM
Logo manokana an'ny famolavolana manokana
Vidiny fifaninanana ambongadiny
Traikefa amin'ny famokarana volomaso manan-karena
Tsy misy habibiana mink 100%
Logo tsy miankina namboarina
Tsiroaroa 200000 isam-bolana
Ny volomaso diso dia namboarina daholo, vita tamin'ny volon'ny mink ultra-light, izay malefaka sy malefaka toy ny volomaso voajanahary. Ny volomaso sandoka vita tanana dia azo ampiasaina indray ary tsaboina tsara. Amin'ny fampiasana teknolojia volomaso namboarina, ny volomaso dia mety ho voajanahary sy malefaka toy ny volomaso tena izy, mamela anao hisongadina foana.
Misy karazana fomba fivarotana mafana misy, ary koa manohana ny fanaingoana ireo fomba takian'ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia mila manome antsika takiana manokana sy masontsivana na santionany ara-batana fotsiny.
Volomaso sandoka voafantina voafantina, aorian'ny fanangonana traikefa an-taonany maro, dia efa manana mpamatsy akora matanjaka sy mahomby isika, manome antsika akora maharitra tsara.
100% vita tanana. Raha ampitahaina amin'ny famokarana masinina, ny famokarana tanana dia afaka miantoka fa tsy ho mikorontana ny volomaso sandoka, ary mampiditra lakaoly amin'ny tanana izahay mba hahazoana antoka fa tsy hianjera ny volomaso.
Ny karazana fonosana volomaso diso dia azo namboarina. Ho an'ny fanaingoana ny logo, ny fonosana vonona dia manohana ny fanontana UV UV. Ny boaty namboarina dia manohana ny fanontam-pirinty UV ary ny fanontana nohomboana mafana.
Ho an'ny kapoka vonona, ny fotoana anaterana dia ao anatin'ny 48 ora, ho an'ny kapoka namboarina, ny fotoana anaterana dia ao anatin'ny 7-25 andro.
Hotontosaina amin'ny fotoana voalohany ny fanontanian'ny mpanjifa. Ho an'ny famotopotorana maika, azafady mba miresaka aminay amin'ny alàlan'ny antso an-tariby na hafatra mivantana.
Raha misy olana ara-kalitao na simba amin'ny alàlan'ny fitaterana dia azonao atao ny mangataka famerenam-bola na lolompo amin'ny entana ao anatin'ny 3 andro fiasana.
Fa maninona no manao kapoka tsy marina?
Ny volomaso diso dia mety hahatonga ny maso ho lehibe sy manintona kokoa, ary ny haavon'ny fikolokoloana dia mety mifanandrify amin'ny volomaso ihany, izay hahasarika kokoa azy.
Nisy volomaso sandoka tany Ejipta sy Roma taloha. Ny volomaso dia noheverina ho marika manintona indrindra. Taty aoriana, taorian'ny nahaterahan'ny volomaso sandoka, betsaka kokoa ny olona nanenjika volomaso. Tamin'ny 1916, talen'ny sarimihetsika iray no nampiasa volo tena izy hanamboarana volomaso sandoka amin'ny filan'ny famokarana sarimihetsika sy fahitalavitra. Taty aoriana, modely britanika iray dia nametraka fironana amin'ny fanaovana volomaso sandoka, ary betsaka ny olona mahalala ny fisian'ny volomaso sandoka.
Amin'ny dingana manaraka amin'ny volomaso sandoka, misy karazany bebe kokoa, endrika sy loko isan-karazany ary fotoana samihafa. Fa na inona na inona karazana volomaso diso, dia azon'izy ireo atao ny "miteny" ny maso aorian'ny ampiharana azy ireo, ary ny maso manintona dia ampy hanentanana azy ireo. Taty aoriana, olona maro no tsy afa-po tamin'ny fametahana volomaso sandoka ary naniry ny hamelana azy ireo hitombo maharitra ny tarehiny, ary teraka ny teknikan'ny fanitarana volomaso.
Amin'ny ankapobeny, ny volomaso sandoka voalohany dia ny hanehoana ny fijerin'ny vehivavy fotsiny, fa izao kosa ny volomaso sandoka dia mandinika bebe kokoa ny maha-azo ampiharina, mety kokoa amin'ny endrika mason'ny olona, ​​fa mety hahatonga ny maso ho lehibe sy manintona ihany koa.
Teo aloha: Label manokana ambongadiny 100% Volo-bolo vita amin'ny volom-borona vita tanana amin'ny tanana
Manaraka: Mamorona marika manokana anao mametaka volomaso sandoka Mink
Mpivarotra kapoka mink 3d
mamorona kapoka anao manokana
volomaso marika manokana
Mora ny mampihatra ny 3D Strip rehetra 5d 100% Mink L ...
Mamorona ambongadiny marika manokana amin'ny lasera manokana ...
Volomaso Siberia tsara tarehy 3D tena izy Mink Lashes M ...
Volomaso masom-bolo tsy azo tanterahina azo ampiasaina azo ampiasaina 3D ...
Ambongadiny vita tanana vita tanana matevina mirehitra 3D Mink Lashes ...
kapoka mink, eyeliner, Mpivarotra volomaso, Volomaso maso, lipgloss, Fanitarana volomaso,